'သားလေးကို ပထမဆုံး ချီမြှောက်ခွင့် ရခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ ဘယ်တော့မှ မေ့မရနိုင်မယ့် အမှတ်တရဖြစ်ပါ? - Yangon Media Group
‘သားလေးကို ပထမဆုံး ချီမြှောက်ခွင့် ရခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ ဘယ်တော့မှ မေ့မရနိုင်မယ့် အမှတ်တရဖြစ်ပါ?
One Direction အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း လီယန်ပိန်းက ပထမဆုံးအကြိမ် သားလေးကို ချီမြှောက်ခွင့်ရခဲ့သည့်အချိန်အား မေ့ဖျောက်၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင်မွေးဖွားခဲ့သည့် သားဖြစ်သူကို ဂုဏ် ပြုခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော နှစ်တစ်နှစ်ကို ကျော်လွန်ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ရက်တွင် အသက်(၂၄)နှစ်အရွယ်အဆိုတော် လီယန်က အင်တာဂရမ်တွင် ယခုနှစ်အစောပိုင်း၌ တင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံတစ်ခုကို ပြန်တင်ခဲ့သည်။
ချစ်သူချားလ်တွီဒီနှင့် အသက်ကိုးလအ ရွယ်သားတစ်ဦးရရှိထားသည့် လီယန်က ”၂ဝ၁၇ခုနှစ်ဟာ ရူးလောက်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပါ။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ နေ့တိုင်းအမှတ်တရတစ်ခု စီကိုတင်နေရပါတယ်။ ပထမဆုံးက သား လေး Bear ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သားလေးကို ပထမဆုံး ထွေးပွေ့ချီမြှောက်ခွင့်ရခဲ့တာ ဟာ မေ့ဖျောက်လို့မရမယ့် အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ချစ်သူ Girls Aloud အဖွဲ့မှ အဆိုတော်ချားလ်ကိုလည်း သားလေး Bear ၏ မိခင်တစ်ဦးအဖြစ် အံ့သြဖွယ်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်ကိုလည်း ချီးကျူးခဲ့သည်။ လီယန်က ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း အင်စတာဂရမ်၌ နေ့စဉ်အ မှတ်တရဖြစ်ဖွယ်ဓာတ်ပုံများကို တင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ပြီးခဲ့သည့်မေလတွင် ဖြန့်ချိခဲ့သော ၎င်း၏ပွဲဦးထွက်တစ် ကိုယ်တော်သီချင်း ‘Strip That Down’ ၏ အောင်မြင်မှုအတွက် ပရိသတ်များကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့သည်။
ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု ၊ ကိုယ့် မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှု မရှိဘဲနဲ့ နိုင်ငံရေး မလုပ်နိုင်ဘူး အဲဒါ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် တိုင်းတရားလွှတ်တော် တရားရေးဦးစီးမှူး ဒေ?